स्पिन प्यालेसको साथ क्रिसमस
जुन 18, 2019 स्पिन महल समाचार र कैसीनो बोनस
Jingle घंटी, जिंग घंटी, सबै तरिका को जंगल, ओह के मजा यो स्पिन पैलेस सबै तरिका संग खेलना छ - हे! ठीक छ, मेरो सबै भन्दा राम्रो काम छैन, तर लेखन जिंग्स मेरो थलो, बच्चा होइन। अर्को वर्ष आएको छ र गयो र यदि तपाईं एक साटोमा पुग्नु हुन्छ भने, म निश्चित छु कि तपाईं सामूहिक छाप अन्तर्गत छ कि 2018 लाई सबैभन्दा छिटो वर्षको मिति हो। यो कति चाँडै गएको हो? होइन, साँच्चै, कति चाँडो? हाम्रो अर्को विम्बल्डन थियो, त्यो सधैं रमाइलो छ। रूसले फीफा विश्व कपको मेजबानी गर्यो, प्रिन्स हैरीले मेघेन मार्केल (आँसु रोलिङ) लाई विवाह गरे, जबकि क्यास्ट्रो युगको अन्त्य भयो र राउल कास्ट्रोले पछाडी पसे र माइगुल डियाज-केनेललाई पराजित गरे। कोलोराडोमा, एक व्यक्ति एक शार्क र एक भालू को बिरुद्ध बच्यो! अब यदि यो भाग्यशाली छैन भने, मलाई थाहा छैन के होईन! हामी स्पिन प्यालेस क्यासिनोको बारेमा बोल्न बिना भाग्यको बारेमा बोल्न सक्दैनौं, अनलाइन मनोरञ्जन हब जसले पनि अर्को वर्षको पछि देखेको छ र अब तपाईं संग, त्यो उत्सवको मौसममा प्रवेश गर्दछ। क्रिसमसको साथ मात्र कोने को आसपास, हामीले सोचेको थियो कि छुट्टयाउने चीज सुरू गर्न तपाईले क्रिसमस-थीम्स अनलाइन स्लट खेलहरूको उत्कृष्ट रङको बारेमा थाहा पाउनु भयो।
सान्टाको जंगली सवारी
2010 मा फर्कनुहोस्, वर्षमा यो अनलाइन भिडियो स्लट खेल जारी गरिएको थियो। नामले यो सबै भन्दछ Microgaming खेलाडीहरूलाई वास्तवमा डिलिबल स्वाद दिन्छ छुट्टीको मौसम पुरानो सेन्ट निकले तपाईंलाई एन्टी माथि उठाउनेछ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्न! सान्टा चट्टानले हर्ली जस्तो देखिन्छ जस्तो कि रीलका बाँकीहरू उपचारमा राखिएका हुन्छन्, आवश्यकतः क्रिसमससँग सम्बद्ध छैनन्, तर निश्चित रूपमा यो वर्षको साथ।5रिल्सको भरमा तपाईंले लेजर, माइनस पिज, पूर्ण-गृह स्यान्डविचहरू, कुकीजहरू, मिठाई, एल्व्सका लट्ठी प्यान्टहरू देख्नुहुनेछ - तपाईले यसलाई नाम दिनुहुन्छ। सान्टा रमाईलो र सम्भावनाहरु लाई एक स्लॉट्स खेल मा जीत दि्छ जो 243 तरिकाहरु लाई जीतने को लागि प्रदान गर्दछ, 25 फ्री स्पिन सम्म तीन जंगली सुविधाहरु र एक मुफ्त उपहार बोनस को लागि केवल रिल्स2र4को लागि को मतलब हो। सबै यो स्लट खेलमा अधिकतम 190 000 सिक्काहरू वर्षा गर्न सक्छन्।
यस भिडियो स्लॉट गेमको साथ, माइक्रोगाइमले अधिक पारंपरिक र एकै सासमा, अधिक पुरानो स्कूल पनि निर्णय गर्यो। सान्त्वना यो मा, तर विषयवस्तु धेरै रमाइलो र निस्क्रिय छ, र अधिकतम लेक-होम हो भने तपाईले कहिल्यै सधैँ भाग्यशाली हुनुपर्छ2400 000 सिक्काहरू! न्यानो आगो स्थानहरू, बाउबलहरू, रूखका वरदानहरू र सांताहरू पत्रहरू अनुरोध गर्ने प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्ने अपेक्षा। चीजहरू सजिलै परिणामहरू, जंगली प्रतीकहरू र स्ट्याक्ड प्रतीकहरूसँग सांता आफैको रूपमा नि: शुल्क स्पिनहरू मार्फत सीधा तर रोमाञ्चक रूपमा राखिएको छ।
यदि तपाईं वास्तवमा उच्च मूल्य सम्भावित रिटर्नको साथ सहि सादगीको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि यो भन्दा बढी नदेख्नुहोस्। 2006 मा रिलीज गरिएको तरिका, Jingle Bells उचित पुरानो विद्यालय गेम हो र यो किनभने यो पूर्ण-तीन तीन रिल स्लट मिसिन हो। अर्को बाटो राख्नुहोस्, यो एक क्लासिक स्लट मिसिन हो। तपाईंले आफ्नो निपटानमा तीन रिले र पाँच वेतनलाइनहरू प्राप्त गर्नुभएको छ, अझै सम्भावना कम्युनिष्टेशन एकदम केहि छ। क्लासिक स्लट मिसिन प्रतीकहरू रिसेप्टरहरू लगाउँछन् र तपाईंको सामान्य BAR को, 7s र क्यारेरी हेर्न चाहन्छन्। क्रिसमस विषयले झिंगल घंटी चिन्हको माध्यमबाट स्पष्ट बनाएको छ, जसमा वेल्जलाइनहरू पूरा हुन्छ, यसको आधारमा 1 000 सिक्किमहरू सबै6000 सिक्किन्स सम्म जाँदैछन्। अब कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं $5मा अधिकतम बेटिंग गर्दै हुनुहुन्छ ...
उत्तरी ध्रुव सांता पाव मा पूर्ण स्विंग मा, एक सुखद विषय संग एक प्लेलिस्ट स्लॉट मिसिन र केहि शानदार Microgaming स्टेपलहरु मा आउछ। यो एक ती भिडियो स्लॉट पेस्टस्टिस्ट र खेलको लागि हो, धेरै पुरानो हुँदा, राम्रो दाखरसको बराबर हो। एक ध्रुवीय भालू, एक पेंगुइन, एक सील, एक खरगोश, एक हत्यारा व्हेल र एक अल्ट्रा प्यारा क्यारेक्टरहरूको लागि तपाईले यस खेलको5रिल्स र 20 paylines मा फेला पार्नुहुनेछ। एक फीचर परिप्रेक्ष्य देखि, जीत जंगली, स्कैटर, मुफ्त स्पिन र जुवा सुविधा मार्फत शुरु हुन्छ। 12x गुणकसँग7नि: शुल्क स्पिनहरूमा तपाईले समृद्धिको लागि नेतृत्व गर्न सक्नुहुनेछ र दुई अद्वितीय जंगलीका लागि धन्यवाद, अझ बढीको लागि धन्यवाद। म जुवा सुविधाको ठूलो प्रशंसक हुँ, एक गेमिंग विशेषताले यी दिनमा कम देख्यो र यसरी तपाइँले यसलाई प्रयोग गर्नको लागि पुरानो खेल खेल्न आवश्यक छ। सुसमाचार यो छ कि सांता पावहरूसँग यो सबै छ!
यो एक छिपी प्रतिभा को रूप मा केहि गम्भीर गल्ती छ। बाहिरबाट, गोप्य सान्टा अझै अर्को स्लॉट खेल जस्तो देखिन्छ जुन सिजनको सिजन भुक्तानी हुन सक्छ, तर मूर्खता हुने खेलाडीहरू होइनन्, यसलाई टाँस्नुहोस् र तपाईं आफैंलाई फटाफुल गर्न अनुहारको मुस्कानमा आफैलाई फेला पार्न सक्नुहुनेछ। दर्पण। सबैभन्दा पहिले, यो अनलाइन स्लट मशीनले 1024 सम्भव संयोजनहरू प्रदान गर्छ, MicroGaming को मूल 243 तरिका अवधारणाको ठूलो मात्रामा। यस खेलको बारेमा के म साँच्चै मनपर्छ यसको बोनस विशेषताहरू काम गर्ने तरिका हो; त्यहाँ कुनै पङ्क्तिबद्ध वा कुनै निश्चित प्रतीकहरू वा कुनै पनि चीजहरू सँगसँगै ती लाइनहरू छैनन् - हेर्नुहोस् कि मैले त्यहाँ के गरे? बोनसमा लगानी गर्ने क्षमता पूर्णतया र पूर्ण रूपमा अनियमित छ र यो किनभने यो कुनै पनि समयमा हुन सक्छ। एकपटक तपाईले भनेपछि तपाईले7रहस्य विशेषताहरूबाट लाभ उठाउन पाउनुभएको छ, र यो जहाँ खेलले वास्तवमा यसको आविष्कार गुणहरू प्रदर्शन गर्दछ। डैशिंग वाइल्ड्स, स्क्याटर स्वादहरू, रोलिंग रेल्सहरू र अन्य इन्टरनेशनल नामहरू पप अप हुनेछन्, प्रत्येकले तपाईंलाई आशाजनक रूपमा भुक्तानी दिन सक्छ।
र त्यहाँ तपाईंसँग यो केटाहरू र केटीहरू छन्, स्पिन प्यालेस अनलाइन क्यासिनो सूची क्रिसमस-तीज अनलाइन भिडियो स्लट खेलहरू, तपाईंको वर्षमा थप उत्साह थप गर्न तयार!
स्पिन महल कुनै जम्मा कैसीनो बोनस >>
शुरुवात गाइड स्लट खेलहरूमा
संयुक्त राज्यको नयाँ अध्यक्ष को हो?
Mayweather's Win पुस्तकहरु लाई राहत दि्छ
तपाईं किन स्पिन पैलेसमा खेल्नुपर्छ
चिलिङ आउट - क्यान्सर कि ठुलो छ
जुन 22, 2019 / जैकपोट सिटी समाचार र कैसीनो बोनस
खेलकुदमा प्रविधिको प्रभाव
एक्सएनएक्सएक्स ओल्ड ओल्ड वाइभ्सको कथाहरू प्रहार गरियो
सेप्टेम्बर 19, 2019 / समाचार
अभ्यास र क्यासिनो खेलहरू - किन यो महत्त्वपूर्ण छ
स्पिन प्यालेसको साथ क्रिसमस अपडेट गरिएको: जुन 18, 2019 लेखक: Damon
0.1 सान्टाको जंगली सवारी
0.2 हलहरू पट्टिदिनुहोस्
0.4 स्यान्ट पाम
0.5 गुप्त सान्टा
1 स्पिन महल कुनै जम्मा कैसीनो बोनस >>
1.1 सम्बन्धित कैसीनो समाचार
1.1.0.1 शुरुवात गाइड स्लट खेलहरूमा
1.1.0.2 संयुक्त राज्यको नयाँ अध्यक्ष को हो?
1.1.0.3 Mayweather's Win पुस्तकहरु लाई राहत दि्छ
1.1.0.4 तपाईं किन स्पिन पैलेसमा खेल्नुपर्छ
1.1.0.5 चिलिङ आउट - क्यान्सर कि ठुलो छ
1.1.0.6 अनलाइन क्यासिनो र सामग्री मार्केटिंग रणनीतिहरु
1.1.0.7 खेलकुदमा प्रविधिको प्रभाव
1.1.0.8 एक्सएनएक्सएक्स ओल्ड ओल्ड वाइभ्सको कथाहरू प्रहार गरियो
1.1.0.9 अस्ट्रेलियन कैसीनो बोनस
1.1.0.10 अभ्यास र क्यासिनो खेलहरू - किन यो महत्त्वपूर्ण छ